Sababta loo xiray Shebelle iyo Sky - BBC News Somali
Sababta loo xiray Shebelle iyo Sky
Image caption Dowladda ayaa horey u xirtay madaxa Idaacadda Shabelle iyo weriye idaacadaasi ka tirsanaa.
Ciidamada nabad sugidda dawladda Soomaaliya ayaa maanta albaabada isugu dhuftay labo idaacadood oo maxali ah oo ka hawlgali jirey magaalada Muqdisho kuwaas oo kala ahaa radio Shabelle iyo radio Sky.
Qaar kamid ah weriyayaashii ka shaqeynaayay idaacadahaasi ayaa la xiray, waxaana la sheegayaa in su’aalo la weydiinayo.
Afhayeenka wasaaradda Amniga ee Soomaaliya Maxamed yusuf ayaa ku sheegay sababta ay u xireen idaacadahaasi iney fidinayeen dacaayado ka dhan ah aminga iyo iska horkeenidda qabaa’ilada.
Maxamed Yusuf ayaa sheegay inay hayaan cadeymo muujinaya in labadan idaacadood ay si qaldan u tabiyeen weerarkii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku qaadeen guriga gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir.
“Idaacadaha Shabelle iyo Sky amniga ayey qalqal ku ahaayeen, waxay sheegeen warbixinno been ah, waxay huriyeen colaado aan jirin, waxay rabaan inay isku direen qabiil iyo wax laga tagay” ayuu yiri afhayeenka wasaaradda amniha ee Soomaaliya Maxamed Yusuf.
Wuxuuna intaa raaciyay inay qaadeen tallaabadii ku hobaaneyn ayna xirnaan doonaan illaa iyo amar dambe. Afhayeenka ayaa cadeeyay inay su’aalo weydiinayaan qaar kamid ah weriyayaashii ka shaqeynaayay labadaasi idaacadood.
Maxamed Yusuf, Afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa tilmaamay inay idaacadahaasi iyo shaqaalihii ka shaqeynayay la marin doono wixii ay muteysteen.
Maaha markii ugu horeysay ee dawladda Soomaaliya ay qoonsato wararka ay baahiyaan idaacadahaasi iyadoo horey loo xirey weriyayaal ka shaqayn jirey.